KDE, Gnome, Xfce, LXDE နဲ့သူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော့်အမြင်။ | Linux မှ
KDE, Gnome, Xfce, LXDE နဲ့သူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော့်အမြင်။
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, အခြား
Desktop များသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကဲ့သို့မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များနှင့်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အညီဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ (သို့မဟုတ်အများစု) ငါတို့တစ်ခုချင်းစီကိုအဘယ်သို့ပေးနိုငျသညျကိုငါသိ၏။
ငါအခွင့်အလမ်းယူသွားတယ်။ ငါ, ရရှိနိုင်တဲ့ desktops အားလုံးနီးပါးကိုကြိုးစားခဲ့သူတစ် ဦး အသုံးပြုသူ GNU / Linux များအဓိကအားဖြင့် (သို့) အရေးအကြီးဆုံး (၄) ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒီနည်းနဲ့သတ်မှတ်မယ်။
1 KDE - အပြည့်စုံဆုံးနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းဆုံး GNU / Linux desktop ။
2 Gnome: ရာဇပလ္လင်မရှိတဲ့ဘုရင်။
3 Xfce: Gnome အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ
4 LXDE: အတန်းထဲမှာအသေးငယ်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံးပေမယ့်အနည်းဆုံးစွမ်းအား
KDE - အပြည့်စုံဆုံးနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းဆုံး GNU / Linux desktop ။
“ အကောင်းဆုံး” သည်တစ်ခုချင်းစီ၏အရသာနှင့်လိုအပ်မှုအပေါ်မူတည်သည်ဟူသောအချက်မှ စ၍ မည်သူမျှ၎င်း၏အတက်အကျများနှင့်အတူမည်သူမျှလျှို့ဝှက်မည်မဟုတ်ပါ။ KDE အသုံးပြုသူများအကြားအခွင့်ထူးခံနေရာတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိခဲ့သည် GNU / Linux များ.
၏ထွက်ခွာနှင့်အတူ KDE ၄.၉ အခြေအနေတွေကရုပ်ဆိုးတယ်၊ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သွားတယ် KDE ၃.၅၊ ငါ, များစွာသောကဲ့သို့, ဆီသို့ ဦး တည်ပြေးလေ၏ Gnome။ ငါအမြဲတမ်းအချည်းနှီးသောခံစားခဲ့ရကြောင်းဝန်ခံ။
ဘာလုပ်လဲ KDE ဒီတော့ပြီးပြည့်စုံသောအဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်အရာကိုကျော်လွန်တတ်၏။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်အမြဲအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည့်အရာမှာ desktop နှင့်၎င်း၏ application နှစ်ခုလုံးတွင်ပါ ၀ င်သော option များဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့၊ ဒါကအနုတ်လက္ခဏာဆောင်တာနဲ့ဝေးနေလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဂျာမန်စားပွဲခုံရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတစ်ခုပါ။
KDE ၌သင်၌ application တစ်ခုစီ၌သင်လိုအပ်သည့်အရာနှင့်အနည်းငယ်ပိုပင်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ KDE စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကျအစီအစဉ်တွေကိုမချန်ပဲ desktop ပေါ်မှာသုံးတဲ့နည်းလမ်းသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ဒီဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် plasma နှင့် လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်အပျက်ဖြစ်နိုင်သလောက်ကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်သောကိရိယာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်နားမလည်သေးသောအရာများဖြစ်သည်။
KDE ၎င်းသည်စားသုံးမှုအနည်းငယ်ကိုစွန့်စားရန်ဆန္ဒရှိသောအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ကွန်ပျူတာနှင့်သူတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိလိမ့်မည်။ ငါ့အတွက်၊ Desktop Environment သည် panel တစ်ခုထက်ပိုနေသည် (သို့မဟုတ်နှစ်)၊ မီနူးတစ်ခု၊ စနစ်ဗန်းတစ်ခု ... စသည်တို့ Desktop Environment သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များ၊ ဖိုင်တွဲများနှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာများနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သည် KDE စွန်ပလွံပင်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကိုအများဆုံးသုံးသနည်း။ ဒီ blog ရဲ့စာဖတ်သူ ၉၈% က File and Folder Manager ဆိုတာကိုငါနဲ့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ KDE ၎င်းတွင်တင်ဆက်ရန်မလိုအပ်သည့်မည်သည့်အရည်အသွေးများနှင့်ရွေးချယ်စရာများကျန်နေသေးသနည်းဟူသော application အတွက်ရှိသည်။ လပိုင်။ သင်နှင့်အတူတန်ဖိုးရှိရှိမနိုင်လျှင် လပိုင်အခြားမည်သည့် File နှင့် Folder Manager နှင့်မျှမဖြစ်နိုင်ပါ။
လပိုင် သင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲများကိုသင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်အောင် tabs များ၊ အပိုပြားများ၊ ပေါင်းစည်းထားသော terminal၊ search engine၊ search filter နှင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
ဒါပေမဲ့ KDE ဒါတောင်မှနောက်ထပ်တတ်၏။ KDE ကျွန်တော်တို့ကို၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအကြားပြည့်စုံခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းပေါင်းစည်းမှုပေးထားပါတယ်။ ငါအထူးသဖြင့်သူတို့ကိုအသုံးမပြုသော်လည်းပေါင်းစပ် Akonadi / Nepomuk / Virtuoso ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုသည့်အခါသူတို့သည်သင့်ကိုပြိုင်ဘက်ကင်းသောစွမ်းအားကိုပေးသည်။ သင်တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကသင်ရှာမတွေ့ပါ KDE အဲဒါအတွက်သင့်တော်တဲ့ app ပါ။
ငါ့အကြံပြုချက် KDE ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအတွက်အရာအားလုံးကိုလက်လှမ်းမီရန်ထိရောက်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအချိန်ကုန်သက်သာစေလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုကိုင်တွယ်သောအသုံးပြုသူများ၊ developer များ၊ ဒီဇိုင်နာများသို့မဟုတ်အရာရာတိုင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာလိုချင်သူများနှင့်၎င်းတို့၏ desktop ကိုအလွယ်ဆုံးနည်းဖြင့် configure လုပ်ရန်အသုံးပြုသူများအတွက်စံပြပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
Gnome ကျွန်ုပ်အမြင်မှာ Desktop Environments ဘုရင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကဖြစ်ခဲ့သည်။ ၏ထွက်ခွာနှင့်အတူ KDE4, ၏မြင့်တက် Ubuntu ကိုနှင့်၎င်းကိုအမြဲသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိသုံးစွဲသူများအကြိုက်ချင်းဖြစ်လာသည် Gnome2လွယ်ကူသောနေရာများရှိရာ application များကိုဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် Desktop ရွေးချယ်စရာများကိုကလစ်အနည်းငယ် နှိပ်၍ ရရှိခဲ့သည်။
Gnome2 ၎င်းသည် Desktop Environment တစ်ခုထက်ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်စီမံကိန်း developer များသို့ delved Gnome3စာကြည့်တိုက်များတိုးတက်လာသည့် Desktop Environment၊ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုဆိုလိုသည် (ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထက်ပို။ ပင် KDE4) ၏အသုံးပြုသူများအဘို့ Gnome2, အခြားကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာရှာဖွေနေဖျက်သိမ်းမှုမှထွက်ခွာခဲ့သည် Xfce, LXDE သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင် KDE.
မပြောနိုင်ဘူး Gnome မိမိအနှင့်အတူ အခံွ ဝေးကနေမကောင်းတဲ့ application ကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ Gnome3 သုံးစွဲသူများစွာသည်သတင်းကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးချနိုင်သော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာများရှိသော်လည်းဤစားပွဲခုံ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာမှာပြောင်းလဲသွားပြီး၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်ပုံမှန်အသုံးပြုသူအပေါ်တွင်အာရုံမစိုက်ပါ။
၎င်း၏ developer များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဘလော့ဂ်တွင်ဒီ desktop ပြောင်းလဲနေသည့်အပြောင်းအလဲများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ Gnome ၎င်းသည်မြေမရှိသောစျေးကွက်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ အခြားပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအခြားရွေးချယ်စရာများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၏အနာဂတ် Gnome ၌တည်ရှိ၏ GnomeOSဒီစီမံကိန်းအကြောင်းကျွန်တော်သိပ်မသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှတ်ချက်မပေးဝံ့တဲ့စီမံကိန်းတခုပါ။
ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့တာတွေအားလုံးမကောင်းဘူးမဟုတ်လား Gnome ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သော application များရှိပြီးပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၎င်းတွင်ရှိပြီးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရွေးချယ်စရာများမရှိခြင်း KDE၊ ဒါပေမယ့်နည်းတူအစွမ်းထက်နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့။
Gnome ဒါ့အပြင်အခြားများအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည် ခွံ သူတို့ကဲ့သို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး y သစ်ကြမ်းပိုး။ သင်၏ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲမန်နေဂျာ (Nautilus)ကအားလုံးအရည်အသွေးတွေရှိသည်ပါဘူးပေမယ့် လပိုင်၎င်းသည်ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အပေါ်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည် Gtkသူ၌ကိုယ်ပိုင်နှင့် third-party အထုပ်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဘုရင်မှာလူကြိုက်များခဲ့သည်။
ငါ့အကြံပြုချက် Gnome ၎င်းသည်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့်အထူးသဖြင့်ထိတွေ့မှုနည်းပညာကိုရည်ရွယ်သည့်ဆန်းသစ်သောမျက်နှာပြင်များကြောင့်ဆွဲဆောင်ခံရသူများအတွက်၊ ကီးဘုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းများကိုစိတ်မ ၀ င်စားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ကဲ့သို့သောအခြားခွံကိုသုံးပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် သစ်ကြမ်းပိုး o စည်းလုံးညီညွတ်ရေး.
Xfce: Gnome အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ
Xfce အများအပြားအတွက်ကျန်ကြွင်းသောသောပျက်ပြယ်ဖြည့်ဖို့လာလေပြီ Gnome2။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် Desktop သည်သူ၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးမှုသည်သူ၌ရှိသည့်ပရိုဂရမ်မာအနည်းငယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်ဝိရောဓိနီးပါးတစ်ခုခု Xfce ဒါကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။
Xfce တစ် ဦး Gnome လျော့နည်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ။ ရုပ်သွင်သွင်ပြင်သည်အခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ configure လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးတစ်ချိန်ကကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသော၊ အလွန်လှပသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သို့သော်အရာအားလုံးသည်မကောင်းနိုင်သော်လည်းအရာများစွာမရှိခြင်း၊ ၎င်း၏အသုံးချပရိုဂရမ်များမှာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးစနစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကောင်းသောကိရိယာများမရှိပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, အပေါ်တည်ဆောက်ခံရ Gtk, သင်သည်perfectlyုံ၏ applications များ၏အသုံးပြုမှုကိုနိုင်ပါတယ် Gnomeဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့သူကသူ့မှာကိုယ်ပိုင် tools တွေပိုရချင်တယ်။
၏အားနည်းအချက်များတစ်ခုမှာ Xfce ၎င်းသည်သင်၏ File and Folder Manager အတိအကျဖြစ်သည်။ သွန်း။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်အရ developer များသည်အပို tabs များသို့မဟုတ် panel များထပ်ထည့်ရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤ application နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများစွာကျဆင်းစေသည်။
ကြွင်းသောအရာအတွက်, အားလုံးအလွန်ရိုးရှင်းပြီး configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် Xfce လုံးဝ (သို့မဟုတ်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်) သင်၏ Configuration စင်တာမှ။ ဗားရှင်း ၄.၁၀ တွင်အသုံးပြုသူများအတွက်တိုးတက်မှုများစွာထည့်သွင်းထားခဲ့ပြီးယခု Desktop Environment ၏အနာဂတ်ကိုယခုကြည့်ရှုရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် debian ပုံမှန် desktop အဖြစ်ကမွေးစားခဲ့သည်။
ငါ့အကြံပြုချက် Xfce ရိုးရိုး Desktop ကိုကြိုက်နှစ်သက်သော system နှင့်အဆင့်မြင့်တာဝန်များကိုမထမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီးအသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်အသုံးပြုလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာရေးသူများ၊ သတင်းစာဆရာများနှင့်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံအရာများအတွက်အသုံးပြုသောသူများအတွက်ပါဝါနှင့်မြန်နှုန်းအကြားမျှတမှုရှိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
LXDE: အတန်းထဲမှာအသေးငယ်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံးပေမယ့်အနည်းဆုံးစွမ်းအား
LXDE ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော Desktop Environments ၏အသေးဆုံးဖြစ်သည် Gtk, အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်ထို့ကြောင့်အများဆုံးထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် applications များကင်းမဲ့သောတစ်ခုဖြစ်သည် Xfceသင်သည်ကိရိယာများစွာမှအသုံးပြုရမည် Gnome ဖြစ်နိုင်ခြေ၎င်း၏အကွာအဝေးဖြည့်စွက်ရန်။
ပုံသေ၏ပုံပန်းသဏ္appearanceာန်အားဖြင့်ပုံပန်းသဏ္appearanceာန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို Windows XP ကိုသတိပေးသည်။ အနည်းငယ်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်လှပသောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် Desktop Environment ၏ File and Folder Manager သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမျက်နှာသာပေးသည်။ PCManFM.
PCManFM ၎င်းတွင်၎င်း၏အစ်ကိုဟောင်းများ၏မျက်လုံးကဲ့သို့သောအရည်အသွေးအချို့ရှိပြီး၎င်း၏အမြန်နှုန်းနှင့်လှပမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်လျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်လာသည် သွန်း၎င်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များထက်များစွာကျော်လွန်သည်။
ငါ့အကြံပြုချက် LXDE ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောအဖွဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမြန်နှုန်းနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းများအကြားပေးသောချိန်ခွင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းနီးကပ်လွန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက်အကြံပြုပါသည်။
ငါကအစမှာပြောပြီးငါထပ်ခါတလဲလဲ: တစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစားပွဲတစ်ခုစီသည်ပြည့်စုံသည်သို့မဟုတ်မရှိသည်။ ဤအ3မျိုးကွဲမဆို (ဖယ်။ ) GNOME shell ကို)အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤ post သည် Desktop Environments တစ်ခုချင်းစီအပေါ်အပေါ်ယံနှင့်ဘက်မလိုက်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီသည်၎င်းတို့တစ်ခုချင်းစီ၏ရွေးချယ်စရာများကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအသုံးချနိုင်သည်ကိုသိသည်။
၎င်းတို့အားလုံးသည်သူတို့လုပ်သောအရာအားလုံးတွင်ကောင်းမွန်ပြီးသုံးစွဲသူအမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမေးလျှင်, ငါနှင့်အတူနေဖို့ပါလိမ့်မယ် KDE y Xfceသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာပေါ်မူတည်သည်။ သင်ဘယ်ဟာကိုပိုနှစ်သက်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » KDE, Gnome, Xfce, LXDE နဲ့သူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော့်အမြင်။
148 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အမှန်တရားကတော့ငါ Xfce, LXDE နဲ့ KDE ကိုကြိုက်တယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲတခုခုအပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၃ လုံးလုံးမှာအတူတူပါပဲ၊ Xp
Makubex Uchiha (azavenom) ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ၃။ သင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ချင်ရင်ဒီမှာ xD လိုချင်ရင်ဒီနေရာကနေထွက်သွားပြီးငါတန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ kde ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အခါငါထားခဲ့ပါ။
နှင့် yapa 😛ကျွန်ုပ်သည်ဤ tutorial ကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ညှိရန်နှင့်ဆယ်ခုထားရန်ကျွန်ုပ်ထားခဲ့ပါသည်
Makubex Uchiha (azavenom) အားစာပြန်ခြင်း
မနေ့ကငါသိပြီးသားဖြစ်လို့ ၄ လနီးပါးအတွင်းမှာပဲ ၃၀၀၀ နီးပါးလည်ပတ်ခဲ့လို့ရိုးရိုးလေးနဲ့အိမ်ရှင်ကငါ့ဘလော့ဂ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်၊ ငါအဲဒီကိုရောက်ဖို့သိပ်မကျန်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၃၀၀၀ နီးပါးလောက်ငါပြောခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုဘာမှသတိမပြုမိဘဲဘာကြောင့်ငါကုန်ကျစရိတ်တွေအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလဲ lost
@elav သည် KDE ကိုကြိုးစားပြီးသည်နှင့်သူသည်ဟဟားဟားနှင့်အတူနေတော့မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ KDE သည်ဤနောက်ဆုံးဗားရှင်းများတွင်များစွာတိုးတက်ခဲ့ပြီး၊ ဤဗားရှင်းတွင် bug နှင့် regressions များကိုပြုပြင်ခြင်း၊ developer များအနေဖြင့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်း
GNOME2 ဟာကျွန်တော့်အတွက်အသက်သာဆုံး၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံးကွန်ပျူတာတွေထဲမှာအမြန်ဆုံးပါ။ သူ၏အတွေးအခေါ်သည်ပြောင်းလဲသွားသည်မှာသနားစရာပင်။ အဲဒါကြောင့်ငါက Debian Squeeze ကိုထောက်ပံ့မှုပြီးဆုံးတဲ့အထိဆက်လုပ်သွားမယ်။ ပြီးတော့ xfce ကိုသိတဲ့ openbox ကိုပြောင်းမယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ KDE နှင့် Xfce အလုပ် netbook တွင်ရှိသည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါပိုပြီး KDE ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြဝန်ခံရမည် ... 😕
KDE သည်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ KDE နှင့် Xfce တို့ကိုလည်းသုံးသည်။ သို့သော် KDE သည်ရောက်ရှိရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်၊ အရာရာတိုင်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူသည်ဘာမှမသိ၊ ဘာမှမသိရန်၊
အခုငါ Xfce မှစာရေးနေတယ်။ အမှန်တရားကတော့အဲဒါကိုအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်တိုအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ တကယ်တော့ငါ xDD အလုပ်လုပ်တာထက်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ညှိခြင်းအချိန်ပိုကုန်၏။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်တာကကျွန်တော့်အတွက် Tuning Xfce ဟာ KDE ထက်အများကြီးပိုလွယ်တယ်။ ထို့အပြင် Gtk ၌အခင်းအကျင်းများစွာနှင့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ gnome-look ကို kde-look နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရုံသာဖြစ်သည်။
KDE (နှင့် Obsidian) နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာသည်အလွန်လှပသည်🙂
မေးခွန်းတစ်ခုမင်္ဂလာပါ။ ညှိခြင်း၊ ဘာမှမကြောက်ခြင်း၊ အရောင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် "snooping" မပါဘဲ system နှင့် application များအတွက်သာအာရုံစိုက်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဥပမာ၊ အရောင် (သို့) window effect သည်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးနေသည့်ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်အရေအတွက်အပေါ်သုတေသနပြုသောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ပါ။ လေထုအတွင်းရှိဓါတ်ရောင်ခြည်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်သာလျှင်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းပေးသည် (ထို့ကြောင့်“ pijadas” ကိုအရေးမပါဟုဆိုရခြင်း) ။ သငျသညျ linux ကိုနှစ်အနည်းငယ်သုံးပြီး (Ubuntu, Opensuse, Fedora, Gnome, KDE နှင့် Xfce ရှိ Scientific Linux) နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများအတွက်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုပြောင်းလဲနေတယ်၊ ​​လအနည်းငယ်မှာကျွန်တော်တပ်ဆင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်တွေလိုတယ်၊ နှင့်အလုပ်, သုတေသနဖြစ်ပါတယ်။ marcinanito ဂိမ်းများ၊ ထူးဆန်းသောအရာများ၊ ဗီဒီယိုနှင့် mp3 သီချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များတွင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီပါ ၀ င်ပါကကွန်ပြူတာတစ်ခုစီတွင်ကွဲပြားသောဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ အချိန်သည်အလွန်အဖိုးတန်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို သုံး၍ နောက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင်မတူညီသောရွေးချယ်စရာများ၊ tabs များစသည်ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဓလေ့ထုံးစံများသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်များနှင့်မတူနိုင်ပါ။ ငါဆိုလိုတာကိုသင်နားလည်တယ်၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကတူညီသော application မျိုးသည်ကွဲပြားသောစားပွဲခုံများတွင်သုံးနိုင်သည်ဟုပြောမည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိပ္ပံပညာကိုရွေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ KDE ဟာနည်းနည်းလေးပဲရှိပေမယ့်အနည်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်ရတဲ့အရာကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအလယ်အလတ်တန်းစားရှိပြီး၎င်းကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ပြီးအပြည့်အဝတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုမပေးပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့အဲဒါကို Spin ကတည်းက Fedora KDE လိုမျိုးကျွန်တော်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ သိပ္ပံပညာတွင် Centos ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည် gnome application အမြောက်အများကိုလက်ဖြင့်ပိတ်ထားရန်လိုအပ်သည်၊ အကယ်၍ သင်ကအခြားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုသိရန်၎င်းသည်စင်ကြယ်သော KDE မှထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောတာကအဲဒါကိုငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကငါ့အမှားလားဖြန့်ဖြူးမှုကပိုမပေးဘူးလားဆိုတာငါမသိဘူး။
ဒီတော့ဒီနေ့ Kde နှင့် Xfce ရှိတဲ့ Slackware ငါ့စိတ်ထဲရှိသည်။ ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ ငါ့မှာ Kde ကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ့်စက်အဟောင်းတွေရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ SL မှာဆိုရင်သူကကောင်းသွားပြီးနောက်ဆုံး Xubuntu ကပိုကောင်းတယ်။ Xubuntu ငါမသွားဘူး၊ Ubuntu ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါလိမ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့် XFCE ပါ ၀ င်သောအရာ မှလွဲ၍ အခြားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ Kde ဖြစ်သည်။ သို့သော်အကျိုးရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် KDE ၏ထောက်ခံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်တက္ကသိုလ်တွင်သုတေသနပြုလုပ်ရန်ရည်မှန်းထားသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ကိုလည်း၎င်းကိုအကြံပေးလိမ့်မည်နည်း။
ငါ Gnome နှင့်အတူ SL အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, ငါက KDE နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့အလိုရှိ၏, ဒါပေမယ့်ငါပြီးသားအောင်မြင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းပြောဖို့ရှိသည်။ အကယ်၍ မည်သူမဆို KDE ကို SL သို့မဟုတ် Centos တွင်တပ်ဆင်ရန် Fedora KDE လည်ပတ်မှုနှင့်အတူတူပင်သန့်ရှင်းမှုရှိရန်အကြံပြုလိုပါကကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ SL KDE ရှိမာလ်တီမီဒီယာကုဒ်နံပါတ်များနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများသည်သေလောက်အောင်သေစေနိုင်သည်။
KDE နှင့်သင်၏ထောက်ခံချက်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အရာ။ ငါ USB drives တွေကိုအများကြီးသုံးပြီးသူတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ပြီးတော့ Gnome မှာသူတို့ကိုသန့်ရှင်းစွာထုတ်ယူလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် KDE မှာလင်းပိုင်တွေနဲ့မတူဘူး၊ မင်းကသူတို့ကိုဖြုတ်ပစ်နိုင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမြဲတမ်းအစာကျွေးတယ်။ KDE မှာဖြေရှင်းချက်ရှိသလား။ ငါဒီအတွက်ပဲ SL Gnome ကိုသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကအရေးကြီးတယ်။
ငါအဆုံး၌မေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါ့အလုပ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၊ SL သို့မဟုတ် Slackware ကိုသင်ထောက်ခံမလား။
သင်တို့ကဲ့သို့သောသူများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Windows မှထွက်ခွာသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်နည်းပညာကျပြီးအင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာရှင်အနည်းငယ်သာရှိကြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ရေးလိုက်တဲ့အရာအချို့ကအများကြီးအကူအညီဖြစ်စေလို့ပါ။ ငါနေ့စဉ်နီးပါးဖတ်ပါ။
အင်း \_ t (ツ) / ဒါပေမယ့်အားလုံးအတူတူအားလုံးကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။
ငါ LXDE ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ စွမ်းအားနည်းမှုနည်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သမျှတွင်အပေါ့ပါးဆုံးဖိုင်ကိုင်တွယ်သူဖြစ်သည့် PCManFM ကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အနည်းငယ်ခက်ထန်စွာဖြစ်သော်လည်းဟေး။ အစပိုင်းမှာတော့ Gnome ကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်။ သူက Gnome2ကိုတက်သွားတဲ့အခါငါသုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Gnome3ထဲကိုပထမဆုံးဝင်တိုက်မိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ Shell ဒါမှမဟုတ် Gnome3သမျှငါမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာ LXde ကိုရောက်တဲ့အထိငါပြောခဲ့တယ်။ အချို့သောအရာများသည်၎င်းသည် XFCE ထက် ပို၍ မြန်ကြောင်းတွေ့ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ သို့သော် (XFCE အသိုင်းအဝိုင်းသည် LXDE ထက်ပိုကြီးသည်မှာသေချာသည်) သို့သော် (အနည်းဆုံး XXE အသိုင်းအဝိုင်းသည် LXDE ထက်ကြီးသည်ဟုထင်သော်လည်း) XFCE သည် Robustness တွင်၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ မိမိအဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူအရူး။
မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသူများသည်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များထက်အထူးသဖြင့် LXDE configuring ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သိမြင်မှုနည်းသည်ဟုကျွန်တော်ပြောလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဟာအခြားပတ်ဝန်းကျင်မှာပုံမှန်အတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အခြေခံကျတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်။
ကြည့်ကြရအောင်၊ မင်းကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်မယ်။ ငါအားကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါဒီ tool ကသင့်ကိုပေးတဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအခြေခံပြီးလုပ်တယ်။ ဥပမာဒီရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေပါ။
- PCManFM တွင်အကြောင်းအရာစစ်ထုတ်ဘားရှိသလား။
- PCManFM တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရှိပါသလား။
- PCManFM တွင် built-in terminal ရှိသလား။
- PCManFM တွင်ပြားများရှိပါသလား။
- PCManFM တွင်ဖိုင်တွဲအုပ်စုများကိုပြသရန်ရွေးချယ်စရာရှိသလား။
- PCManFM တွင်ဖိုင်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ရွေးစရာရှိပါသလား။
ငါတကယ်အဖြေကိုသိလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတကယ်ဖြေစရာမလိုဘူး။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် Xfce ကိုဘယ်လောက်ပဲကြိုက်နှစ်သက်ပါစေ၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိရိယာများဖြင့်၎င်းကိုတည်ရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုအရှိဆုံးနှင့်အစွမ်းထက်ဆုံး Desktop ဖြစ်စေသည့် KDE ၌ရှိသောရွေးချယ်စရာတစ်ဝက်ဘယ်တော့မှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရမည်။
ပါးရည်နပ်ရည်အတွက် Krunner ကို Gnome ၏ "run" နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ 😀
ဒါပေမယ့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုတာခင်ဗျားရဲ့မှားယွင်းနေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့အယူအဆနဲ့အညီဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော့်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ application တစ်ခုပါ။ PCManFM မှာ filter bar တစ်ခုရှိတယ် content သို့မဟုတ် search သို့မဟုတ် terminal ဆိုသည်မှာ function များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းတို့သည်အပိုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၄ င်းတို့အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအခြားပရိုဂရမ်များ၊ ဥပမာ terminal သို့မဟုတ် search box (၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် LXDE သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်မရှိခြင်း (သို့) စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ဆိတ်ကွယ်ရာသည်သင်ကလစ်နှစ်ချက် နှိပ်၍ ထည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့အခြားပရိုဂရမ်များပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘာကြောင့် Word မှဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတည်းဖြတ်ချင်သနည်း၊ ၎င်းအတွက်ဖန်တီးခဲ့သော Photoshop မှတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် LXDE သည်အလင်းနည်းပြီးရိုးရှင်းသော desktop ကိုရှာဖွေသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုနည်းပါးခြင်းသို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်အတိုချုပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ညီမျှသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်လိုပါက၎င်းအတွက်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် LXDE ကိုမရွေးချယ်ပါ။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုလျှင်၊ Windows တွင်ရုံးသုံးပရိုဂရမ်များနှင့် suites များနှင့်သင်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါက၎င်းသို့မဟုတ်ထိုလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဖန်တီးထားသောအခြားပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုရလိမ့်မည်။ GNU / Linux ။
LXDE သည်စွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းသည်သာမကအခြားသော desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များထက်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သော်လည်း၊ စွမ်းအင်သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတိုင်းအတာနှင့်သာမကအခြားအသုံးအဆောင်များဖြစ်သောအသုံးဝင်မှုရှိခြင်း၊ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ အမြင်အာရုံရှုထောင့်နှင့်လည်းဆက်စပ်သည်ဟုငါထင်သည်။
ဒါပေမယ့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုတာခင်ဗျားရဲ့မှားယွင်းနေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့အယူအဆနဲ့အညီဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော့်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ application တစ်ခုပါ။ PCManFM မှာ filter bar တစ်ခုရှိတယ် အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ် terminal တစ်ခုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြစ်ကြသည်
အတိအကျဆိုရသော်၊ ဖိုင်များ၊ မော်ကွန်းတိုက်များ၊ သင် PCManFM ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုပါစို့၊ သင်က PDF documents တစ်ထောင်ရှိသော folder တစ်ခုသို့သွားသည်။ သူ၏အမည်နှင့်သင်ရိုက်ထည့်သောအရာသည်မူရင်းအမည်နှင့်ကိုက်ညီရမည်။ သင်ရေးသည့်အတိုင်း Dolphin filter နှင့်အတူကျန်စာရွက်စာတမ်းများပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ တိုက်ဆိုင်မှုများသာကျန်ရှိတော့မည်။ သင်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်ဟုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။
Windows = ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Windows Explorer ဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပါတယ်၊ ဒြပ်စင်တွေအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြသထားပါတယ်။ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိပါဘူး၊ အပို tabs တွေပြားတွေမရှိပါဘူး။ ဥပမာတစ်ခုပေးပါရန် Windows Explorer ထက် PCManFM သို့မဟုတ် Thunar ကိုသုံးရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ကြည့်ကြရအောင်၊ အကယ်၍ သင်သည်စာပိုဒ်၏ထိုအပိုင်းကိုသာယူလျှင်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သည်သို့မဟုတ်သင်ထင်သောအရာနှင့်တိုက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ အခြားအပိုင်းကကျွန်ုပ်၏အငြင်းပွားမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော်အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ PCManFM ရှိခြင်းသည်သင်ပြောသောထိုလုပ်ဆောင်မှုများသည်သင့်အားပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်၊ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေရန်ကူညီနိုင်လျှင်ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသိလျှင် LXDE သည်ပေါ့ပါးပြီးရိုးရှင်းသော်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အခြားသောပတ်ဝန်းကျင်များအပြင်ရိုးရှင်းသော၊ အလင်းရောင်နှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောပရိုဂရမ်များရှိသည်၊ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်အလင်းရောင် (များသောအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ရွေးစရာများသို့မဟုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနည်းသော) အရာနှင့်တန်ဖိုးရှိရှိအရာတစ်ခုအကြားပြည့်ဝသောမျှတမှုကိုရှာရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါပြောတာလည်း Windows ကအတူတူပဲဒါမှမဟုတ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ကုမ္ပဏီတွေမှာများသောအားဖြင့်တော့ဒီအလုပ်တွေကိုအများဆုံးလုပ်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါကအသုံးအများဆုံးဖြစ်တာကအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ၎င်းသည်စုပ်ယူသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အများဆုံးအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် LXDE ကိုသုံးသည်။ ဖိုင်မန်နေဂျာအနေဖြင့် Nautilus ကိုသုံးသည်။ PCmanFm ကိစ္စပြီးသွားပြီ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ GNOME ကိုငါရွေးသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူအတွက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သူများ၏လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်၊ တခြားအရာအားလုံးကို pimp မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ Linux ကိုအသစ်ရောက်လာတဲ့သူအတွက်တော့ပြီးပြည့်စုံတယ်
ငါဒီဆောင်းပါးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ အမှားတစ်ခုခုကိုတွေ့ရင်မင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်၊ စာရေးသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမင်းသိပ်မသိဘူး၊ ဆိုလိုတာကအဆုံးမှာဒီသေးငယ်တဲ့သေတ္တာလေးကိုသင်သိမ်းထားသင့်တယ်၊ ငါဥပမာငါသည်လည်းစာဖတ်ခြင်းကောင်တာဘေးမှာထားလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါးကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ KDE သည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးရွေးစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် KDE application အချို့ကိုတိုးတက်စေချင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမကြိုက်သည်၊ ဥပမာ - Dragon Player သို့မဟုတ် VLC ။ Qt မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖွင့်စက်တွေလိုပဲ Bangarang ကငါ့ကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ မင်းကတခြားသူတွေကိုသိရင်ငါအဲ့လိုသဘောကျမှာပဲ။
အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်တော့ငါတို့ဟာစာရေးသူကိုထိပ်ဆုံးမှာထားဖို့စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်သည် .. 😀
KDE အကြောင်း၊ ငါ့ VLC ကိုသဘောကျတယ်၊ ငါ Bangarang ကိုတွေ့ပြီးငါသဘောကျတယ်😀
ကြည့်ကြရအောင်၊ ငါသူတို့မကြိုက်ဘူး၊ သူတို့ဟာငါမကြိုက်ဘူး GNU / Linux video player မဟုတ်ဘူး၊ ငါပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်၊ Gnome မှာ Totem ကိုငါကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါနဲ့ကစားသူဖြစ်သင့်တာပေါ့ မှန်ကန်သောနှင့်လိုအပ်သောရွေးချယ်စရာများ၊ ရိုးရိုး interface တစ်ခု။ ငါ KDE မှာအလားတူအရာတစ်ခုကိုရှာနေတယ်။ နှစ်ခုလုံးကအရမ်းလွန်းနေပြီး Dragon Player ကိုငါမကြိုက်ဘူး။
Bangarang သည်ဗီဒီယိုမကောင်းသောကစားသမားမဟုတ်သော်လည်းကြောက်စရာကောင်းသောကစားသမားဖြစ်ပြီးဂီတစာကြည့်တိုက်များကိုစီစဉ်သူဖြစ်သည်။ Amarok သည်တေးဂီတကိုကောင်းစွာကစားနိုင်လျှင်အဘယ်ကြောင့်အခြားကစားသမားရှိသင့်သနည်း။ ငါ့အတွက်အဲဒါကိုပြန်ထုတ်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုစနစ်တကျစုစည်းထားတာလား။
Amarok (သို့) Clementine ဂီတအတွက်၊ VLC အတွက် video အတွက်ငါ KDE အတွက်လျောက်ပတ်သောရိုးရှင်းသောဗီဒီယိုဖွင့်စက်များကိုကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရှာဖွေသည်။
truko22 (@ truko222) ဟုသူကပြောသည်
SMPlayer ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျပြီး VLC ကိုကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
truko22 သို့ပြန်သွားသည်။ (@ truko222)
ထားခဲ့သူများအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် smplayer ကိုကျွန်တော် interface သိပ်မကြိုက်ပေမယ့် VLC လိုမျိုးပေါ့၊ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါဘဲ။
အိုကေကောင်းပြီ၊ ငါလည်း try ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး
သငျသညျ kaffeine, umplayer, kmplayer, playbak, bakaar, loopy များကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ရိုးရှင်းသော kde video player ဖြစ်သည်။
Miguel အိန်ဂျယ် Martinez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ အမှန်တရားကတော့ SMPlayer ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းက VLC ကိုပြန်မသွားချင်ပါ။
ငါစုစုပေါင်း KDE၊ စာတန်းထိုးမန်နေဂျာ (၎င်းကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲသည်) နှင့်လုံး ၀ ပေါင်းစည်းမှုကိုငါမီးမောင်းထိုးပြထားသည့်ဗွီဒီယိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်။ (VLC ၌မရှိ)
ငါ lxde မှလွဲ။ အားလုံးနီးပါးကြိုက်တယ်
ငါသစ်ကြံပိုးခေါက်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါညီညွတ်ရေးကိုသုံးတယ်၊ ငါ gnome shell ကိုသုံးတယ်၊ ငါကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုပိုပြီးလှပအောင်ဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, KDE ငါမြင်ငါပြတင်းပေါက်မှတ်မိသောသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ငါ့ကိုငြင်းပယ်အနည်းငယ်ပေးသည်, ဒါပေမယ့်ငါမြင်သောများစွာသော kde စားပွဲခုံလှပဖြစ်ကြောင်းငြင်းပယ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါသူတို့ကဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲပုံကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပြissueနာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလာ ပုံမှန်အားဖြင့် (chakra နှင့်အခြား live kd distros kde) ကျွန်ုပ်လုံးဝမကြိုက်ပါ🙁
အဲ့တာမှန်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် KDE ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုမနှစ်သက်သောတစ်စုံတစ်ယောက်က Xfce ကဲ့သို့ KDE ကိုသင့်စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအခြားမည်သည့် desktop environment ကိုမဆိုပေးသူကသင့်အားဤသို့ပြောထားသည်။
KDE နှင့် Xfce တို့ကိုအများဆုံးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ 😀
ထို့အပြင် LXDE ။ ၎င်းတွင်လုပ်ရန်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများစွာမပါရှိသော်လည်း၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်၊
.gtkrc-2.0 သို့မဟုတ် gtkrc.mine ဖိုင်တွဲများတွင်လက်ဖြင့်ထည့်သွင်းရမည့်အရာများရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စာသားဖိုင်များကိုပြုပြင်ခြင်းသည်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများဖြင့်ပြုလုပ်သည်ထက်အချိန်ပိုလိုသည်မှာမှန်ပါသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါအပတ်တိုင်းကွဲပြားခြားနားသော desktop ကိုရှိသည်ဖို့နှစ်သက်သူတွေကိုမဟုတျပါဘူးကတည်းက, တပ်ဆင်သည့်အချိန်မှာ configuration လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျကျတစ်ချိန်ကပြုပြီး။ ငါနှစ်သက်တဲ့အချိန်မှာ Desktop (အများဆုံးနောက်ခံပုံအပြောင်းအလဲတစ်ခု) ကို personalize လုပ်ဖို့မေ့သွားတယ်။
LXDE သည်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်မျှမြန်မြန်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသောအခါ ပို၍ ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြတ်သန်းရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်၏သွက်လက်မှုကြောင့်အခြားမည်သည့်အတားအဆီးများအတွက်ပေးဆပ်ရသနည်း။
taringa အတွက် kde အလွန်ကောင်းသောညှိရန် post တစ်ခုရှိသည်။
ထို link ကိုပါသလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀
အမှန်မှာ KDE သည် ပိုမို၍ ပြည့်စုံသည်။ သို့သော် ၄ င်းသည်ဗားရှင်း ၄.၀ နောက်ပိုင်းတွင်အချို့သောပေါ့ပါးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်လေးလံသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်လေးလံသည်။ Digi ကို Qt မှ ၀ ယ်ယူလိုက်ခြင်းအားဖြင့် KDE လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုမှန်ကန်စွာဆက်လက်ထားရှိမည်ဟုမျှော်လင့်မိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုအလွန်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားသောအခါပိုင်ရှင်များသည်လမ်းမှားသို့ရောက်သောအခါအစကတည်းကစတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ LXDe မှအပအခြားပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည် XFCE ၌သာနေမည်။
မင်းသိရင် အခုငါ့အလုပ် netbook မှာ KDE ကိုသုံးတယ်။ မင်းဘာသိလဲ။ KDE သည်ကျွန်ုပ်ကို Xfce ထက် (တစ်ခါတစ်ရံပိုနည်းသည်၊ အခြားအချိန်များများ) နီးပါးစားသုံးသည်။ Gnome ထက်အများကြီးနည်းသည်။ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
သူငယ်ချင်းတို့၊ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလေးစားတယ်၊ အရသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပေါ့။ အရောင်များ😀
ငါ KDE နဲ့ XFCE ကိုသုံးတယ်။ KDE နဲ့ငါ့ပြသနာက CPU သုံးစွဲမှုတက်လာပြီးငါပုံရိပ်ကိုအေးခဲစေတယ်။ ငါပြproblemsနာမရှိဘူး။ ဒီ CPU သုံးစွဲမှုမြင့်မားရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကဘာလဲဖြစ်နိုင်လဲသင်သိလား။
cpu ရှိ system monitor နှင့်ထိပ်ဆုံးမှအောက်သို့အမှာစာအများဆုံးအသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပါ။ nepomuk (သို့) akonadi များကိုလည်း disable လုပ်နိုင်သည်။ လျော့နည်းသော CPU များကိုစားသုံးရန်အတွက်သင်သည်လျှောက်လွှာများ၏ပုံစံ၊ စတိုင်၊ ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းမှုသို့သွားနိုင်ပြီးဂရပ်ဖစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် cpu အနည်းငယ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ တခါတရံအချို့သော 3rd party tmb plasmoid အသုံးပြုခြင်းမှအေးခဲသွားသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်စဉ်များကို CPU ကိုစားသုံးမှုဖြင့်အမိန့်ပေးနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တွင် AMD Athlon 64 ×2Dual Core 3800+ 2Ghz ပရိုဆက်ဆာ 4Gb RAM ပါရှိသည်။
😮အလေးအနက်ထားသင့်ပါသလား။ နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် distro tb ???
ဒါကသူ့ netbook ပါ။ https://blog.desdelinux.net/unity-en-netbook-hp-mini/
၎င်းသည် Debian Testing (လက်ရှိ Wheezy) ကိုအသုံးပြုသည်။
RAM ၏ 110Gb နှင့်အတူ HP က Mini ကို 1 .. 😀
LXDE ကိုကျွန်တော်အလွန်သဘောကျပါသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သည်မယုံနိုင်စရာပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းတွင်အဆောက်အအုံများစွာရှိပါသည်။ F4 သည်မည်သည့်ဖိုလ်ဒါမှမဆို bookmarks မှ terminal ကိုဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ စာရိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ထဲရှိဖိုင်တွဲအတွင်းရှိဖိုင်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ စသည်တို့
၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲသူများအတွက်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် LXDE ၏ရိုးရှင်းမှုကိုလူတိုင်းမနှစ်သက်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ် pc ပေါ်တွင် mageia 1 မှ KDE ၏မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်ုပ်ပြသသည်။
ထိုအခါသင်သည်ကောင်းသော KDE မရှိနိုင်ကြောင်းမပြောပါနှင့်။
- ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အခါ urls အတိုကောက်၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာသွားသည့်ကျွန်ုပ်၏ယခင်ထင်မြင်ချက်အတိုင်းမဖြစ်နိူင်ပါ
- စာမူ၏ရေးသားသူသည်ကောင်းမွန်သော၊ အကောင်း၊ အကောင်း၊ အထင်သေးသည်
URLs အတိုကောက်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ alaintm (အဓိကအကြောင်းအရာကိုမည်သူစီစဉ်သည်) ၎င်းကိုယခုပင်လုပ်ရန်အချိန်ရှိသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အစီအစဉ်များတွင်မပါရှိသောသူ၌ဟဟားဟားလုပ်ရန်အခြားအရာများရှိသည်။
ငါ Mageia2တွင် KDE ကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ တခါတရံပြန့်ကျဲနေသောများစွာသောရွေးချယ်စရာများကရှုပ်ထွေးသည်မှန်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများကြောင့်၎င်းကိုငါစွဲကိုင်ထားသည်။
အခြားရွေးချယ်စရာများအကြောင်းကိုလည်းဖတ်လိုပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Enlightenment ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်စဉ်းစားနေပါသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောနည်းများဖြင့်အဆင့်မမြင့်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်အလွန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း၎င်း (menu မှလွဲ၍) အလွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြီးတော့အခြားပတ်ဝန်းကျင်ကိုသင်အကြံပြုတယ်၊ ငါ Openbox နဲ့အနကျအဓိပ်ပါယျအကြောင်းကြားဖူးတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲကများစွာသောအရာတွေကိုငါမတွေ့ရသေးဘူး။
Ubuntu ကို Unity ထည့်ပြီးအခြား distro တစ်ခုရှာပေးတဲ့အတွက်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်ဖို့လိုတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Xubuntu ကို install လုပ်လိုက်တော့ငါဝမ်းသာတယ်၊ ငါ့လက်တော့ကတခြားပုံပဲ။ ကျွန်တော်အရသာအတွက်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့ Ubuntu မှာ Gnome Classic ကိုငါကြိုက်နှစ်သက်သောအဓိက panel ၏အသွင်အပြင်သည်။ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Thunar ကနည်းနည်းပဲရှိမယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်တော့အများကြီးရှိတယ်။
စာရေးသူဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်အခြားအရာများထက် ပို၍ စွမ်းအားကြီးသည်ဟုမထင်ပါ။ ၎င်းသည်အရသာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ပန်းတိုင်များဖြစ်သည်။ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ၊ operating systems များ၊ ဝတ္ထုများ၊ ပီကေ၊ ကီးဘုတ်၊ အိုင်ဖုန်း၊ ပီစီစသည်တို့နှင့်သာမကဤငြင်းခုံမှုမျိုးအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့အပြည့်စုံဆုံးဆွဲဆောင်မှုကတော့ KDE ပါ။ ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးကြောင့်ကျွန်မကိုခေါင်းမူးစေတာမို့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူး။
ငါအလင်းရောင်စားပွဲပေါ်မှာနှင့်ငါလက်ကိုလိုအပျသောအရာကိုငါကြိုက်တယ်သောငါနှင့်အတူငါချစ်သော Xfce နှင့်အတူကြိုက်တယ်။
ငါသည်လည်း SolusOs မှ Gnome2ကိုအသုံးပြုသည်။ ယခုငါ xlde ကိုစမ်းသပ်နေပြီး၎င်းသည်လုံးဝမကောင်းသောအရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာများနှင့်လည်းကိုက်ညီနေသည်။
Unity, Cinnamon and Gnome ကျနော့်အမြင်မှာလက်တွေ့မကျပါ။ KDE ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလက်တွေ့ကျဖို့အသုံးမပြုခင်၊
ငါ KDE နောက်ထပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ငါနောက်ဆုံးမှာကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများကြီးဖတ်ပါ။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Mate နှင့် Compiz တို့နှင့်အတူရှိနေပြီးကျွန်ုပ်သည် Gnome2 နှင့်အတူရှိနေသေးသကဲ့သို့ဘဝကိုနှစ်သက်မိသည်။
အလွန်မျှတတဲ့ +1 ဆောင်းပါးကောင်းတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျန်တဲ့သုံးစွဲသူ ၂% ထဲမှာကျွန်တော်ပါ ၀ င်ရမယ်။ ဒီနေ့ငါ့အတွက်အရေးကြီးဆုံး application နဲ့ငါအများဆုံးသုံးတဲ့သူကငါအများဆုံးသုံးတဲ့သူပဲ။ ငါကတော့ browser - အမြဲရှိတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်၊ သူတို့ဟာစက်ကိုငါ့ရဲ့ဗဟိုချက်မှာထားတယ်။
ကောင်းပြီဟုတ်ပါသည်၊ ဘရောင်ဇာသည်အသုံးအများဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် File Manager တွင်သင်သေဆုံးရမည့်အရာများ for
- KDE (တစ်သက်တာအသုံးပြုသူနှင့်တည်ဆောက်သူ) ။
- စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး (ကြီးကျယ်တဲ့အယူအဆရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆိုးဝါးတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ရှိတယ်) ။
- XFCE (သို့) LXDE (သူတို့ဟာတူညီတဲ့အဆင့်မှာပဲရှေးရိုးစွဲလွန်းတယ်) ။
- သစ်ကြံပိုး (တူညီသောဟောင်း, အသစ်သောဘာမျှ) ။
- Gnome (အသုံးမပြုနိုင်) ။
@hipersayan_x KDE ပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးပါသလား။ သင်ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုတွင်ပူးပေါင်းရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား။
တဖန်သင်တို့မိတ်ဖက်စားပွဲတင်အကြောင်းကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ??? ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ Gnome2လမ်းခွဲမျှော်လင့်တာရှည်အသက်။ http://mate-desktop.org/
ယခုအချိန်တွင် KDE သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး desktop ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တိုးတက်မှုသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းတို့တွင်ထူးခြားပြီးအလွန်ပြည့်စုံပြီးပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ငါသည်လည်း၎င်း၏လက်ရှိဗားရှင်းအတွက် Gnome ၏ထွက်ပေါက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာပုံမှန် pc အတွက်လက်တွေ့အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်း၏အနည်းငယ် (နီးပါး null) configuration options များပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အခင်းအကျင်းအများစုသည်ငါနှင့်မတူ၊ ပြaddingနာကိုထပ်ဖြည့်နိုင်သည်။ KDE ထက်အရင်းအမြစ်များစွာသုံးစွဲခြင်းအပြင်ဗားရှင်းလွန်သွားခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောတိုးချဲ့ချက်များအကြောင်း။ ငါ XFCE နဲ့ MATE ကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသိပ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အလွန်ကောင်းသော Gnome application များရှိသည်ကိုငြင်းဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင် KDE များထက် Gnome multimedia applications များကိုအသုံးပြုရန်ပိုနှစ်သက်ပါသည်။ လူတိုင်းကသူနှင့်အတော်တူသည်ဟုထင်ပြီးမိမိလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုအတူတူပင်သုံးစွဲကြသည်၊ KDE မှ desktop environment တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အားကိုးရာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်တင်းထားသည်။
ယခုတွင်ငါသည်ဤအရပ်၌ဖော်ပြခဲ့တဲ့မရှိသေးသောအခြားနည်းလမ်းနှစ်ခု - razor-qt နှင့်မူလတန်း (Pantheon shell) ဖြစ်သည်။ ငါက Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်မဟုတ်သောသင်တုန်းကို kwin မပါဘဲ (openbox ကိုသုံးသည်) နှင့်ပလာစမာမရှိဘဲ kde အမျိုးအစားအဖြစ်သုံးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် (၎င်းသည်ပလာစမာထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်) ၎င်းသည်အနည်းငယ်စားသုံးသည် (kde ဖြစ်စဉ်များစတင်ချိန် ၂၅၀ MB ထက်နည်းသောသုံးစွဲမှု) ရှိသည်။
Pantheon သည်ကျွန်ုပ်မှားယွင်းမှုမရှိပါက gnome shell တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် gala ကို window manager အဖြစ်၊ file browser တစ်ခုကဲ့သို့ files များ၊ element dock တစ်ခုအဖြစ် plank နှင့်မူလတန်းအဖွဲ့မှဖန်တီးသောအခြားပရိုဂရမ်များစွာကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အတော်လေးတည်ငြိမ်မှု (၎င်းသည် alpha သို့မဟုတ် beta ရှိသော်လည်း) ယနေ့ခေတ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ အဆင်ပြေဆုံးနှင့်ကြော့ရှင်းသောပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အကယ်၍ ၎င်းတွင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများစွာမရှိပါ။
Razor qt ငါလည်းစမ်းကြည့်ပြီးပြီ LXDE အတွက်အပြိုင်အဆိုင်ကြီးလို့ပြောရမယ်။ ၎င်းတွင်ကိရိယာအချို့ (ဥပမာအားဖြင့်၊ netbook တစ်ခုတွင်ဘက်ထရီပမာဏကိုမြင်နိုင်ရန်တစ်ခုခုမရှိပါ၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်မတွေ့ရပါ) ။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အနာဂတ်တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ရသော်လည်းမကြာမီကဤစီမံကိန်း၏သတင်းကိုမတွေ့ရသေးပါ ။
Pantheon သည် Gnome Shells ကိုထူးဆန်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်တက်ကြွစွာမသုံးပါ။ သို့သော်မူလတန်းစီမံကိန်းသည်၎င်း၏ application များတွင်အရည်အသွေးတစ်စုံတစ်ရာကိုကမ်းလှမ်းရန်အမြဲတစေစိုးရိမ်ပူပန်မိသောကြောင့်တည်ငြိမ်သော version ကိုပြောဆိုရန်များစွာပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ။
ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ငါပြောခဲ့တဲ့စားပွဲခုံတွေကိုစမ်းကြည့်ပြီး Gnome3သည် Shells နှင့်အတွေးအခေါ်အမြောက်အများကိုတူညီသောအခြေခံနှင့်နှိုးဆွခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ ဗားရှင်း ၂.၃၀ သည်ဗားရှင်း ၃ (နောက်ဆုံးတွင် ၂.၃၂ ဖြစ်သော်လည်း) ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာလိုက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်မှတ်မိပြီးအပြောင်းအလဲသည်စိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ KDE နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပို့စ်မှမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုရာတွင် KDE သည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော desktop ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သောအရာများ (ဥပမာ - အချို့သောအခြေအနေများတွင်သတိပေးချက်များ၏အပြုအမူကဲ့သို့) ရှိသော်လည်းအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်ဆက်သွယ်ရန် developer အမြဲရှိသည်။
Vicky ကိုဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်သင်အသုံးပြုသော distro နှင့် Pantheon Shell ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည့်အချက်အလက်အချို့ကိုသင်မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါသလား။
အဲဒါဟာအကျိုးမရှိဘူး၊ ငါ Enlightenment (သို့မဟုတ် E17) ကိုအချိန်အတော်ကြာသုံးခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ် ၎င်းသည်အလွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်လမ်းကိုအလုပ်လုပ်သည်။ ငါ XFCE ကိုအရမ်းလေးစားပေမယ့် E17 ကအဲ့လောက်မြန်တယ်။ KDE မှာအင်အားကြီးမားတဲ့ application တွေရှိတယ်။ K3B လိုပဲငါသူတို့ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့အံ့သြစရာကောင်းပေမယ့်ငါလိုအပ်တဲ့မြန်နှုန်းကိုမဆုံးရှုံးခဲ့ဘူး။ Pcmanfm သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောဖိုင်ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးသည်။ Gnome မှ Gimp သို့နှင့် GTK2o3 ၌ရေးထားသည့်အခြားပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်ယူဆောင်သည်။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအရာများကိုမငြူစူရန်မလိုပါ၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များကိုပေးသည်။ E17 နှင့်အတူကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်၊ မြန်ဆန်။ အလွန်အမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အရမ်းဆိုးတာပဲ။ စမ်းကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်အစတွင်အလွန်ကွဲပြားသည်မှန်သော်လည်း၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူသင့်သည်။
ငါ E17 အကြောင်းအများကြီးပြောလို့မရဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကနည်းနည်းနည်းနည်းလေးပဲကြိုးစားပြီးစမ်းခဲ့တာပေါ့။ တကယ်တော့ Desktop Environment လား Windows Manager လားဆိုတာငါမသိဘူး။ 😕
ငါ e17 ကိုလည်းသုံးပြီးအရမ်းမြန်တယ်။ ရိုးသားဖို့လိုတယ်၊ အလုပ်မရှိသေးပေမယ့်ပြbutနာမရှိဘဲ LXDE နဲ့ XFCE နဲ့အပြိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုမအောင်မြင်နိုင်တာက menu ကို configure လုပ်တဲ့အခါ (ငါလိုချင်တဲ့အမိန့်ကိုကိုင်တွယ်ချင်တယ်) နဲ့ screen resolution နဲ့တစ်ခါတစ်လေမှာအဲဒါကိုမစောင့်ဘဲ 800x 600 ဆီကိုပြန်သွားတာပါ။
သငျသညျ E နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်။ အနည်းငယ်ပိုမိုမှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်မလား ??? Mageia မှစပြီး Debian နှင့် derivatives များကို အသုံးပြု၍ ငါထွက်လာပြီး E17 ကို install တော့မည်။
အလွန်ရည်မှန်းချက်ဆောင်းပါး .KDE ငါ့အရိုသေလေးစားမှု, XFCE ။
စာကောင်း ငါ (အထူးသဖြင့်အလှအပအတွက်) ဖော်ပြခဲ့တဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် KDE ကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအမြဲတမ်းစွန့်ခွာသွားခဲ့တယ်။ ငါနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ Debian နဲ့အတူငါ distro လို့ထင်တယ်။ ပိုပြီးတည်ငြိမ်ပေမယ့်တောင်မှ debian KDE)) မိုးသည်းထန်စွာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါမကြာသေးမီက Cinnamon နှင့်အတူ Linux Mint ကိုထပ်မံအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်ကြီးမားသည်မဟုတ်သော်လည်းသယံဇာတသုံးစွဲမှုကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်များဆုံးရှုံးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားဖျားနာစေခဲ့သည်။ သို့သော် Mint ကိုမစွန့်ပစ်မီဤတစ်ကြိမ်တွင် XFCE (ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Xubuntu တွင်၎င်းကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆွဲသော Thunar ၌ bug တစ်ခုကြုံခဲ့ရသည်) XFCE ကိုစမ်းသုံးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ အလွန်ပေါ့ပါးပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည်။ အလေ့အထအရ (Linux တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်မကိုက်ညီသောပရိုဂရမ်များရှိနေခြင်း၊ သို့မဟုတ်အလားတူရွေးချယ်စရာများမရှိသောကြောင့်) ကျွန်ုပ်သည် Windows7ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။ သို့သော်သီတင်းပတ်အတော်များများတွင် Mint ကို XFCE နှင့်အမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိပြီး၊ PCManFM ဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်၊ သင့်အတွက်ဤအချက်သည်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ - ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ Enhancer 0.17 ဟုခေါ်သော plugin တစ်ခုဖြင့်တေးသီချင်းကိုကျွန်ုပ်နားထောင်မိသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်။ အကယ်၍ Linux တွင်၎င်းကိုထောက်ပံ့သောကစားသမားတစ် ဦး ရှိခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ထပ်တူထပ်ဆောင်းပါရှိလျှင် သို့ဖြစ်လျှင်ငါ linux သို့ငါ့ခုန်နိုင်လိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်း Aimp နှင့် Wine မှတဆင့်တေးဂီတကိုကျွန်ုပ်နားထောင်သည်။ လွန်ခဲ့သောအချိန်က linux ကို အသုံးပြု၍ သက်သောင့်သက်သာမရှိ၊ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုမခံစားရပါ။ Debian က XFCE ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်၊ ဒီပေါင်းစပ်မှုကကွန်ပျူတာတွေကိုအားကောင်းစေလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာပါ
Gnome သည် Shell နှင့်မပတ်သက်ပါက၎င်းသည်ဝေးကွာသော application တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်မပြောနိုင်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါကဆိုးတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကဆိုးတယ်၊ ပိုဆိုးလာတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက icon + sales list နဲ့ panel + desktop ရဲ့ concept ကိုချန်ထားခဲ့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့တိုးတက်မှုတစ်ခုပါ။ ငါအဲဒါကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတာနဲ့၊ သင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်တယ်။
ဒီထက်နည်းသောအင်္ဂါရပ်များ + စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုနည်းပါးမှု၊
ဟားဟား !! ငါ Gnome ကိုသိပ်အပြစ်မတင်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မှန်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုငါနားမလည်ဘူးလား။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားမဝင်သော application များနှင့် extensions များကိုအသုံးပြုရမည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သင့်သည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ် Gnome 3၊ မင်းဟာအဆိုးရွားဆုံး4ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် !! ပြီးတော့ငါ XFCE အကြောင်းမသိဘူး ...
Aaron Mendo ဟုသူကပြောသည်
ငါ Fedora 17 မှာ GNOME-Shell ကိုသုံးတာအလွန်ကောင်းတဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှာ ၁ GB RAM နှင့် Pentium 1 ပရိုဆက်ဆာအများကြီးမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်ပြောင်းခြင်း၊ ဘာစီလိုနာစပိန်တွင် EFL Developer Day တစ်ရက်ရှိတော့မည်ကိုသင်သိပါသလား။ http://www.enlightenment.org/p.php?p=news/show&news_id=49 နို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်သည်အလင်းရောင်ရရှိမှုသည်ဘက်ထရီများစစ်ဆေးခြင်းကိုလမ်းပြမြေပုံတွင်ပြပြီးဖြစ်ကြောင်း5ပုံရသည်။ http://trac.enlightenment.org/e/roadmap သတင်းအဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမယ်၊
Aaron Mendo အားပြန်ပြောပါ
XFCE RULLZZZ, ငါပြောတာကသူတို့အားလုံးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်၊ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရင်းအမြစ်တွေကိုစားတယ်။ စွမ်းအားနဲ့ notebook ကိုအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူး၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ 5, KDE + Arch နှင့်အတူ 30:2 ကြာမြင့်ခဲ့ပေမယ့်သံသယမရှိဘဲ KDE လှပသောနှင့်အလွန် Configure လုပ်လို့ရတဲ့, ယခုသင်ကလိုချင်သောကြောင့်ထွက်သွားဖို့ကောင်းသောအချိန်ရှိသည်ဖို့ရှိသည်ကတည်းကကတည်းက XFCE, အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးနှင့် elav အဖြစ်အလွန်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပါတယ် ဘလော့ဂ်ကကောင်းတယ်ဒါပေမယ့်ငါမကြိုက်တာတစ်ခုခုရှိတယ်။ ညာဘက် panel ကအရမ်းကြီးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးဖန်သားပြင်သေးသေးလေးတွေပေါ်မှာတွေ့ရတယ်။ ယောက်ျားတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံး Debian နဲ့ KDE ထက်သိတယ်ဆိုရင်ငါ Debian ရှိ Xfce ထက်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုပိုမိုမြင့်မားတယ်ဆိုတာကိုငါသတိထားမိသည်။
ဒါဟာအရင်းအမြစ်တွေများများစားစားစားတဲ့အချိန်မှာစားသုံးမှုဟာများများစားသင့်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော့်အတွက်အခြေခံစားသုံးမှု 400 mb ပမာဏနဲ့ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ဆိုလိုတာကဘာမှမလည်ပတ်ဘူး။ ငါ Debian မှာ KDE ကိုမစမ်းခဲ့ဘူး၊ တနင်္ဂနွေမှာငါအလုပ်လုပ်နိုင်မလားကြည့်ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ငါနဲ့ငါ့အဖွဲ့နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာနောက်မှပြောပြမယ် Ariki ကိုနှုတ်ဆက်တယ်
ကောင်းပြီ၊ ငါလည်း KDE က Debian နဲ့သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုငါ Mageia နဲ့ KDE ကိုသုံးတယ်၊ ငါကောင်းတာလုပ်နေတယ် !!
မင်္ဂလာပါကောင်းသောဆောင်းပါး။ KDE သည်အလွန်ပြည့်စုံပြီးပေါင်းစပ်ထားသည့် desktop တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလင်းရောင်လုံးဝမတွေ့ရသော်လည်းအခြားပတ်ဝန်းကျင်များထက် application များကိုဖွင့်ရန်နှေးကွေးသော်လည်းရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်နေရာတိုင်း၌သူတို့သည်ငါ့ကိုခေါင်းမူးစေသည်။ XFCE သည်ကောင်းမွန်သော desktop တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မပြည့်စုံခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ - အချိန်ကြာမြင့်စွာပေါ့ပါးသော desktop ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ Thunar နှင့်အတူ keyboard shortcuts များ၊ function keys များနှင့်အခြားအထူးရွေးချယ်စရာများဖြင့်ပျက်ကွက်သည်။ သူကကျွန်တော့်ကို MB ၃၀၀ ထက်မနည်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏အယူအဆကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်သော်လည်း (၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောမူလ desktop environment တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်) ၎င်းသည်ကီးဘုတ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ LXDE သည်ပေါ့ပါးသည့် desktop ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပါဝါမန်နေဂျာမရှိခြင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါသည်။ ၎င်းသည် PC အဟောင်းများအတွက်သာဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းရှိရန်။ ဟုတ်မှန်သည်၊ @Elav မဟုတ်ပါ၊ ယခုသင်သည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုစီကိုမှန်ကန်သောနေရာတွင်နေရာချသည်။ ကျွန်ုပ်သည် XFCE ၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုသာပြောခဲ့သည်မှာအံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ), Gnome3(လည်းသဘောတူ) အတွက်အနည်းငယ် "ကျိန်စာ" နှင့် KDE နီးပါးမေ့လျော့။
ဒီအံ့ ram စရာကောင်းသည့်4gigabytes ram ရှိပါကသင်သည် KDE ကိုထပ်မံအသုံးပြုသည်။ သင့်အား KDE club သို့တရားဝင်ကြိုဆိုပါသည် !!!!
တကယ်တော့ဟဟားဟား၊ ကျွန်ုပ်မှာ netbook မှာ KDE ရှိတယ်၊ Xfce နဲ့ပေါ့။
Elav အစီရင်ခံစာသည်အလွန်ကောင်းသည်။ Linux ၌ကျွန်ုပ်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်လေးခုကိုကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးမှာ xfce ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုငါကြိုက်နှစ်သက်သလိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီး၎င်းသည် kde ကဲ့သို့စားသုံးခြင်းမရှိသောကြောင့်တည်း။ အားလုံးလေးခုကဲ့သို့ gnome ဖြစ်ပါတယ်။
semantic desktop ကို KDE ။
ကျွန်ုပ်သည်လင်းပိုင်၊ နော့တ်လပ်စ်သို့မဟုတ်သံသရာတို့ကိုမသုံးပါ။ ကောင်းတဲ့ terminal နဲ့ voila ။ ငါ kate သို့မဟုတ် gedit, vim နှင့် voila မလိုအပ်ပါ။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးအတွက်ငါအရွယ်အစားပြောင်းတာ၊ ပြတင်းပေါက်ကိုရွှေ့တာ၊ ၀ င်းဒိုးအကြားရွှေ့ပြောင်းတာ၊ keyboard ကိုပဲသုံးပြီးလုပ်နိုင်တာပါပဲ။ သင် google chrome + vimium ကိုသွားပြီးတကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းချင်ပါသလား။ ပတ် ၀ န်းကျင်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပြောတဲ့လူတွေထက်ပိုကောင်းတယ်။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာခြင်းက mouse ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သည် (သို့) keyboard နှင့်နီးပါးဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသောအချက်က၎င်းသည်လုံလောက်သောချိန်ညှိနိုင်မှုနှင့်မည်သည့်သော့နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သော desktop သည်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုပြောခြင်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်မှာထုတ်လုပ်မှုသည်အသုံးပြုသူအပေါ်မူတည်သည်။ Elav သည် KDE၊ သင်၏ desktop၊ ငါနှင့် Gnome Shell နှင့် lxde နှင့်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။
LXDE နှင့်အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးမှာ KNOPPIX ဖြစ်သည်။ KDE နှင့်စွမ်းရည်ပြည့်ဝစွာအလုပ်လုပ်သော Gnome နှစ်ခုလုံးကိုသင်ကိုင်တွယ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုကျိုးနွံစွာ4p2.26 နဲ့ 700mb ram ပေါ်မှာ install လုပ်ထားပါတယ်
ဒီကနေ့ငါ Windows ကိုပဲသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် Mageia3ကို KDE 4.9 နဲ့အတူငါအရင်ကလို linux ကိုမျှော်နေတယ်။
dwm လိုမျိုး window manager, openbox, fluxbox, ဒါမှမဟုတ် tiling manager တွေကဘယ်မှာလဲ။
၎င်းတို့တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးချယ်စရာနည်းပါးသောကြောင့်မဟုတ်ပါ (ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည် DE ကြီးများထက် ပို၍ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သင်အား elav ဟုခေါ်သည့်အတိုင်းစွမ်းရည်နည်းပါးသော၊ သို့မဟုတ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီး၎င်းကိုအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ရှိသောကွန်ပျူတာများတွင်သာအသုံးပြုသည်မဟုတ်ပါ။
Roberto Gea အားပြန်ကြားပါ
ဆောင်းပါးသည် Windows Manager မဟုတ်ဘဲ Desktop Environments အကြောင်းဖြစ်သည်။ OpenBox, Fluxbox ... စသည်တို့ဖြင့်သင့်တွင်ကောင်းမွန်သော Desks များရှိနိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းတို့သည် Desktop Environments မဟုတ်ပါ။ 😀
သစ္စာဉာဏ်အလင်းသည်စားပွဲခုံထဲသို့ ၀ င်သည် ??? နောက်ထပ်သံသယတစ်ခုရှိသေးသည်၊ အခြားမည်သည့်စားပွဲခုံများကိုစမ်းကြည့်။ ရနိုင်သနည်း။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သိချင်တာတွေ၊ ဖော်ပြမထားတဲ့သူတွေကိုအခွင့်အရေးပေးတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။
ငါသည်သင်တို့ကဲ့သို့တူညီသောသံသယရှိသည်။ Desktop Environment ဟုခေါ်ဆိုသည့်အရာ ၄ ခုနှင့် RazorQT ကိုသာကျွန်ုပ်သိသည်။ ထိုတွင်ရှိသလားဆိုတာကျွန်ုပ်မသိပါ။
အခုတော့ငါ KDE Gnome ထက်အတူတူသို့မဟုတ်ပိုမိုပေါ့ပါးထင်ပါတယ်
ပိုမိုစိတ် ၀ င် စား၍ လှပသော😀ဟဟားဟားဖြစ်ခြင်းအပြင်။
ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ သို့သော် LXDE နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သဘောမတူပါ။
ကျွန်တော့်အတွက် LXDE သည်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်မတူအောင်ပြုပြင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။
ကျွန်ုပ်ကိုသိသူများသည်ကျွန်ုပ်သည် LXDE ကိုသုံးသည်ကိုသိကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စာရေးကိရိယာအချို့ကိုထည့်ရန် OpenBox နှင့် Compton အစား Openbox နှင့် Thunar အစားငါ (၄ နှစ်တာ ၀ န်ရှိခဲ့သော) Fluxbox ကိုသုံးသည်။
ငါဘာကြောင့်သုံးတာလဲ RAM နှင့် CPU အမြောက်အများ (Compton သည် 2Mb RAM ကိုသာသုံးစွဲသည်) မလိုအပ်ဘဲလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အချို့လူများက LXDE နှင့် Fluxbox သည်အရုပ်ဆိုးသည်ဟုမမြင်နိုင်ရန်အတွက်ငါသည်ငါ့စားပွဲခုံ၏မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကိုချန်ထားခဲ့သည်။
ကောင်းပါတယ်၊ နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာ ၁၀၀% Linux အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာငါကြိုက်တယ်ကြောင့်။ အခုတော့ငါဟာရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမတွေ့မချင်းကြိုးစားရုန်းကန်စရာမရှိတော့ဘူး။
Ubuntu + Gnome ကိုစပြီးသူတို့ Unity ကိုမပြောင်းမချင်းငါစခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ငါအကျွမ်းဝင်လာတယ်။ ငါသည်လည်းသစ်ကြံပိုးနှင့် MATE ကြိုးစားခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းစမ်းသပ်မှုတွေအပြီးမှာတော့ငါဟာရိုးရိုးလေးဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုခုရချင်လားဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး MATE သို့မဟုတ်သစ်ကြံပိုးခေါက်ကိုပိုနှစ်သက်ကြောင်းဝန်ခံသည်။
စည်းလုံးညီညွတ်မှုလည်းကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၆ လတစ်ကြိမ်ပြန်လည် install လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ငြီးငွေ့လာကတည်းက LMDE + MATE နဲ့အတူရှိနေပါတယ်။
ဤပတ် ၀ န်းကျင် (၃) ခုကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။ အထူးသဖြင့် MATE သည် Gnome3 နှင့် Gnome2 လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ရှိသောသစ်ကြံပိုးခေါက်များဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ Gnome လိုက်သင့်သည့်လမ်းကြောင်းလား? ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတံခါးဖွင့်ထားပြီလား
သင်ငါ့ကိုမေးလျှင် MATE သည်စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုငါထင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများစွာအတွက်ကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်မေ့ပျောက်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမေ့သွားလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Gnome3ကို Classic (သို့) FallBack အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပိုပွတ်တိုက်သင့်တယ်။
ငါလည်းကံရှိလိမ့်မည်ဟုထင်သောအခြား (s) ရှိပါတယ်။
အကောင်းဆုံးစားပွဲခုံ၊ ၎င်းသည်အလင်း၊ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သော mod ဖြစ်သည် http://i.imgur.com/tN9Gx.jpg
ဟားဟား .. ငါအရမ်းသံသယဖြစ်မိတယ်။
ဟားဟား !! ရှင်းလင်းသော !! ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့မင်းက gadgets တွေပဲထည့်လို့ရတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်က "သင်၏ desktop" ထဲဝင်ပြီးသူ့ရဲ့ settings ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ပြtheနာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
Gnome Shell သည် Unity မှ လွဲ၍ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသော desktop environment တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထာဝရထာဝရ Gnome Shell *
ငါ hehehe, နောက်ကျ KDEro တွေအများကြီးစောင့်ကြည့်။
နေ့တိုင်းငါ OpenBox ကိုပိုကြိုက်ပေမယ့်ငါ့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ XFCE က XFCE ပါ
ငါထင်တယ်၊ Gnome စီမံကိန်းကိုမကြိုက်ဘူး (ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဆိုတာကိုဖယ်ထားတယ်)၊ ငါတို့ရဲ့ desktop ပေါ်မှာချင်တာက identity, customization and expression ... KDE ကကောင်းကောင်းပံ့ပိုးပေးတဲ့အရာပါ။ ငါကအားနည်းချက်ကိုသတိပြုမိသည့်အခြားပတ်ဝန်းကျင်များ၊ သင် configuration file ကိုတိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ပြီးအပို application များနှင့် / သို့မဟုတ် extensions များကိုအသုံးပြုရန်၊ "tinker" ကိုမနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများ၊ သူတို့၏ကွန်ပျူတာသည်အလုပ်များအတွက်သာဖြစ်ကြောင်းအဆုံးအသုံးပြုသူများ၊ နှင့်ဖျော်ဖြေရေးသည်ကြောက်လန့်ပြီး Windows သို့ပြန်သွားပါသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာပါ။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါရစေ၊ ငါဟာဒီဟာကိုကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာနဲ့သဘောကျမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတော်တော်များများကငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုမြင်ပြီးကြောက်နေကြတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အရသာအတွက်အကောင်းဆုံး desktop သည်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအားပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်၊ ထို့အပြင်သူတို့၏အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် (KDE မျက်လုံးများစွာနှင့်ရှုပ်ထွေးမည်မဟုတ်))
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ PC တွင်ဖြန့်ဝေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီးအချို့သူများပြောသည့်အတိုင်း MATE ပတ်ဝန်းကျင်ရုတ်တရက်အချို့သည်၎င်းသည်ခေတ်နောက်ကျသွားနိုင်သည်ဟုထင်မြင်ကြသော်လည်း LMDE ကဲ့သို့သော semi-roll release distro တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုသင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သောတွန်းအားဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် Gnu / Linux ကိုအသုံးပြုသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးစားပွဲခုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ ငါသစ်ကြံပိုးခေါက်အချို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ပြုလုပ်နိုင်သည့်သစ်ကြံပိုးခေါက်ကိုနှစ်သက်သည်။ MATE တွင်အသုံးပြုသော mintmenu သို့ Gnome shell တွင်အပြောင်းအလဲများစွာရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းရေရှည်တွင်အပြုသဘောဆောင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်၊ သို့သော် Elav ပြောသကဲ့သို့၎င်းသည်အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြသည်
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အရ Kde သည်အကောင်းဆုံး desktop ဖြစ်သည်။ သို့သော် Pentium IV နှင့်အမြဲတမ်းနေမည်ဆိုပါကပုံမှန်နှေးကွေးခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ 🙂
KDE အကြောင်းပြောရရင် (Linux ကလူအများစုကသိပ်ကိုအထင်သေးလွန်းတယ်လို့ထင်တယ်) ငါ Malcer ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်လာမည့် Chakara (ယခုသို့မဟုတ်လာမည့်သီတင်းပတ်တွင်ထွက်ပေါ်လာရန်) အတွက်အနုပညာလက်ရာ၌မျှဝေသည်။
ထင်တာပဲ !! KDM နှင့် KSplash ကိုကျွန်တော်အမြင်အရဆုံးကြိုက်ခဲ့သည်၊ Megeia အတွက်ဗားရှင်းတစ်ခုကိုစောင့်နေမည်။
ငါ LXDE ကိုသုံးတယ်၊ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်၊ လူသစ်အတွက်အစပိုင်းမှာရှုပ်ထွေးပေမဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကိတ်မုန့်တစ်လုံးဖြစ်သွားပြီးအလင်းရောင်စားပွဲခုံတွေအကြောင်းငါသဘောကျတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုခွင့်ပြုတာက သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောစက်ရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေအရည်များများပိုထွက်သည်။ XFCE ကအရမ်းကောင်းတဲ့ Desktop ဖြစ်ပေမယ့်သတိထားပါ၊ သင့်မှာအရင်းအမြစ်အနည်းအကျဉ်းသာရှိတဲ့စက်ရှိရင်အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့မထင်ဘူး၊ သတိထားပါ။ ငါသည်လည်း ICEWM ကိုသုံးပြီး၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးသော desktop ဖြစ်ခြင်း၊ အလွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းခြင်းတို့ကိုရှာဖွေသော်လည်း၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်အချိန်ပိုပေးရ ဦး မည်။
ငါ LXDE ကို Gnome ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာကိုသဘောတူတယ်။ အဲဒါကအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သင်အရင်ကအသိပညာလိုအပ်တယ်။
ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံး KDE သည်ဗားရှင်း 3.5 ဖြစ်သည်။
ငါဒီနေ့ version တွေမကြိုက်ဘူး .. တကယ်တော့ငါ 4.5 install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါမကြိုက်ဘူး။ နှေးနေတယ် ...
ဗားရှင်း ၄.၅ မှာပြောရန်အလွန်မသင့်တော်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်လုံး ၀ အရောင်မတူပါ။ ၄.၈ သို့မဟုတ် ၄.၉ သည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ၄.၃ နဲ့ဆက်လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ငါဟာပြproblemsနာတွေ၊ အံ့သြစရာတွေမရှိဘဲအရာအားလုံးအလုပ်လုပ်ပြီး Gnome 4.3 လိုပဲကျွန်တော့်ကိုအနည်းငယ်သာစားတယ်
ကျွန်ုပ်သည်အသုံးပြုသူဖြစ်သည်။ slaxkware 12.2 KDE 3.5 .. ပိုမိုမြန်ဆန်။ တည်ငြိမ်သော ...
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော့် UBUNTU ကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်တော်မကြိုက်ပါ။
ငါ Gnome ကိုအချိန်အကြာကြီးသုံးခဲ့တယ်။ Gnome3 တောင်မှဒါပေမယ့် version အသစ်ကဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
ငါ KDE ကြိုးစားပြီးအရာရာပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်ကျေနပ်လောက်သောအကောင်းဆုံး Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိရှိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုခံစားရသည်။ ထို“ ပျောက်ဆုံးနေသောတစ်ခုခု” ခံစားချက်နှင့်သင်ဘယ်တော့မျှမကျန်ရစ်တော့ပါ။
ငါ Chakra, Sabayon, OpenSuse နှင့်ယခု Kubuntu တွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဒရော့စ်အားလုံးသည် KDE ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
KDE သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ဖြန့်ဖြူးမှုအများစုတွင်၎င်းကိုပုံသေ desktop အဖြစ်မထည့်သွင်းရသည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။
ဒါကပြiselyနာဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ လူတွေကိုသင်ရွေးချယ်လေလေ၊ သူတို့ကိုဒုက္ခပေးလေလေဖြစ်တယ် (အလေးအနက်ထားရမယ်) ဒါကြောင့် distros အများစုဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူတို့လေ့လာသင်ယူဖို့သုံးတယ်။
လက်တွေ့တွင်လည်းလက်တွေ့ကျကျရှိနေသည်။ ယနေ့ခေတ် desktop အသုံးပြုသူအများစုသည်သူတို့၏စနစ်အတွင်းသို့မ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ သူတို့ပေးအပ်ထားသည့်အရာနှင့်၎င်းတို့အားပေးထားသောနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုခြင်း - ၎င်းသည် Apple ၏မဟာဗျူဟာ၏အောင်မြင်သောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်?
KDE SC သည်အဆင့်မြင့်သောအသုံးပြုသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ KDE တွင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။
အနည်းဆုံးတော့ LXDE နဲ့ OpenBox ကိုကျေနပ်မိပါတယ်။ အမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲ speed ကိုကြိုက်တယ်။
KDE စည်းမျဉ်းများ !!
Gnome2ကုန်သွားကတည်းကငါ Ubuntu 11.04 နဲ့ကပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ငါနဲ့တခြားမိသားစုတွေနဲ့ကိုက်ညီမယ့် ​​"တစ်ခုခု" ကိုရှာနေတယ် ... ပြီးတော့ငါ Xfce နဲ့ကပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် Thunar? ကောင်းပြီ, ငါစပျစ်ရည်အောက်မှာ Midnight Commander သို့မဟုတ် TotalCommander ကိုသုံးပါ (စိတ်မကောင်းပါဘူး, ငါ linux အပေါ်ကြိုးစားခဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာ NONE နီးကပ်လာ, အများကြီးလျော့နည်းရိုက်နှက်) ။ ဗီဒီယို? သင်တန်း၏ VLC ။ အသံလား ဒီနေ့ငါ linux winAMP ထက်မပိုသော Qmmp ကိုတွေ့ပြီ။ သူက 2.x skins ကိုတောင်သုံးနိုင်သည်။ ပိုပြီးပြည့်စုံသော mintMenu အတွက် "ပုံမှန်" application menu ကိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့် linux Mint ရှိ Xfce သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အဲဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော့်မှာ (နည်းနည်းလေးသာရှိတဲ့ PC မှာ 120Gb HD ရှိပြီးသား၊ သုံးစွဲမှုနည်းပြီး၊ အာရုံပျံ့လွင့်စရာနည်းနည်း) နည်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ KDE4သို့မဟုတ် Gnome3 နှင့်ပြproblemနာမှာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အရာဝတ္ထုများရှိရာနေရာများကိုလေ့လာရန်အချိန်မရှိတော့ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်သည်အလိုလိုသိသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မဖြစ်ပါ။ Ok, Terminal မှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများရှိသည် (ကျွန်ုပ်သည်မကျေမနပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခွေးဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး IBM သည်ပထမ ဦး ဆုံးကွန်ပျူတာကိုမရောင်းခင်ကွန်ပျူတာများနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ) ၄ င်းကိုငါအချိန် ၄ မိနစ်ဖြုန်းပါကမည်သည့်နေရာတွင်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ Desktop, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဘယ်မှာလဲဆိုတာကျွန်တော်မမြင်မိပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ငါ LXDE (ကျန်မိသားစုများကကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်), Gnome3 / Unity / Shell (အကယ်၍ linux ၏အားသာချက်မှာသင်လုပ်ချင်ရာလုပ်နိုင်သည်ဆိုပါက) ကြိုးစားခဲ့သည် (သို့) Gnome I? Out ... ), KDe (အရမ်းလေးပြီးရှုပ်ထွေးတယ်၊ အဲဒါကို Plasma (သို့) ခေါ်သမျှကနေ deactivate လုပ်ဖို့နာရီဝက်ကျော်အချိန်ယူပြီး netbook မှာအင်တာနက်ကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကိုသိဖို့အင်တာနက်ကိုသွားခဲ့တယ်။ ထိုအပလီကေးရှင်းများ ... တိုတို၌, ထွက်)
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၌ Xfce နှင့် mint သစ်ကြံပိုး (linuxMint + Cinnamon) နှင့်အတူရှိသည်။ ငါကပေါ်မှာပါ တကယ်တော့ငါ liveUSB delinuxMint Xfce နှင့်အတူပါ။ 🙂
စပျစ်ရည်အောက်မှာ TotalCommander? ဟားဟား၊ သင်လင်းပိုင်အကြောင်းမကြားခဲ့ဘူးလား။ နှင့် Krusader?
lxde ဟာမကောင်းတဲ့ desktop မဟုတ်ဘူး။ ငါအမြန်ဆုံးသိတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာမင်းကိုလှပအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ငါ့ရဲ့ pc ဟောင်းမှာငါ့အတွက်အဆင်ပြေစေမယ့်တစ်ခုတည်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ခံမဲပေးခြင်း။ ဟားဟား
သငျသညျ AwesomeWM ကြိုးစားခဲ့သို့မဟုတ် dwm ခဲ့သလား
ငါ Linux ကို ၂ နှစ်ကြာနေခဲ့ပြီးမတူညီသောဗားရှင်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ဖြန့်ဝေခြင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငါ ubuntu Jaunty Jackalope gnome နဲ့တွေ့တယ်၊ သူကအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ubuntu နဲ့ငါလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူစည်းလုံးညီညွတ်တဲ့ဝန်းကျင်နဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျမကိုကျည်ဆံတွေနဲ့လိုက်ဖမ်းသလိုပြေးလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးဖြင့်လှည့်လည်သွားလာနေသော်လည်းလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုရှာမတွေ့ပါ။ သို့သော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်စုစာအုပ်သို့ပြန်သွားသည်။
ငါလက်ျာလက် xfse.gnome စားပွဲခုံကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်တိုင်း… ..blablabla, ပြီးတော့ဘူးသီးကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်၊ အမှန်တရားကအရမ်းကိုပညာရှိတယ်။ ဆော့ဗ်ဝဲကမ္ဘာကအံ့သြစရာကောင်းတယ်။
Gustavo Martinez ဟုသူကပြောသည်
ငါ LXDE ကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ အရမ်းပေါ့၊ အရမ်းမြန်တယ်၊ သင်လိုချင်တာအားလုံးကိုပြသပြီး Openbox ဘေးမှာကစားခြင်းဖြင့်အလွန်လှပသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်၍ Linux နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် KDE နှင့်အတူနေရန်လိုအပ်ချက်နှင့်အရသာနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာသည်ကျွန်ုပ်၌ netbook ရှိသည်။ kde နှင့်ယင်ကောင်များအနေဖြင့်၊ ငါ gnome classic, 2000, unity, xfce နှင့်ကျွန်တော်ကောင်းစွာစမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ netbook ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာသိပ်မပျော်ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်တာထက်ညှိတာပိုပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ် kde နှင့်နေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ desktop ပေါ်တွင် linux mint3သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့်၎င်းသည် ၁၀၀ သို့သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျသည်။ သဘာ ၀ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသို့သင်အသုံးပြုသောအခါ gnome2 ကိုအသုံးပြုသောအခါအခြားတစ်ခုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အနည်းငယ်ကုန်ကျသည်။ KDE ကကျွန်တော့်ကိုနည်းနည်းလောက်ကုန်တယ်။ ရေဝေရေ Ubuntu မှာပေါင်းစည်းမှုကဖြစ်နိုင်တာလို့ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီကနေသုံးစွဲသူတွေအခြားပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာပေါ့။ တော်တော်များများက KDE ကိုနည်းနည်းကြောက်ကြတယ်။ ကွဲပြားခြားနားပေမယ့်သူတို့ဝင်သောအခါသူတို့ကကောင်းတစ် ဦး နှင့်အတူကျန်ကြွင်းနေကြသည် အရသာထဲမှာ ... ငါရွေးချယ်သည် KDE: D ...
ငါ LXDE ကိုသုံးတယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံးကိုငါစမ်းကြည့်ခဲ့ပြီးပြီ။ အမြန်နှုန်းကိုငါရှာနေတဲ့အချိန်မှာလှပတဲ့စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာကိုကြည့်ပြီးမျက်စိစူးစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ရင် KDE ကိုရွေးလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအမြန်နှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်မထားဘူး။
မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ KDE ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းနှင့်လျောက်ပတ်သော HW ပေါ်တွင် LXDE ကဲ့သို့မြန်ဆန်သည်။ desktop တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားတည်ရှိနိုင်သည့်မီလီစက္ကန်ကွာခြားချက်များသည် desktop တစ်ခုစီရှိရရှိနိုင်သည့် application များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ LXDE အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသောဒီဇိုင်းများနှင့် KDE အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
ငါ KDE ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ gnome3 ကမသက်မသာဖြစ်တာကြောင့်များသောအားဖြင့် text files (doc, txt) နဲ့ spreadsheets တွေများတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ကိုရောထွေးပြီးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုချလိုက်တယ်။ Dolphin နဲ့အတူ FTP ဖိုဒါတွေကိုတောင်ကျွန်တော်တောင် access လုပ်တယ်၊ filezilla မလိုအပ်တော့ဘူး၊ Kate I နဲ့ FTP client များမသုံးပဲ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသို့ပြောင်းလဲမှုများကိုသိမ်းဆည်းပြီးသိမ်းထားသည် (Dolphin မှအပ)
ကျွန်တော့်အတွက်တော့အကောင်းဆုံး MATE, Linux Mint နှင့်အတူ၊
Leonardo ဒယ်နီယယ် Velazquez Fuentes ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Linux ကိုသုံးလကြာခဲ့ပါပြီ။ Ubuntu 3, 13.04, xubuntu, linux mint, kinnamon and xfce, crunshbag, fedora gnome and xfce, bodhi linux, manjaro xfce, kinnamon and openbox စတဲ့အမျိုးမျိုးသော version နှင့်ဖြန့်ဝေမှုများကိုကြည့်ရှုနေတယ်။ မူလတန်း OS သည်လှပသည်
ငါ xfce ကိုလေးစားစွာဖြင့်ပြောနိုင်သည်မှာအလှဆုံးသည် Manjaro မှဖြစ်ပြီးငါနှင့်အတူမနေခဲ့ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ sudo apt-get install နှင့်လုံးဝလက်ထပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် hahaha
mint xfce ဟာလည်းအရုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး၊ ညှိဖို့သိပ်ခက်တယ်
Leonardo Daniel Velazquez Fuentes အားပြန်ပြောပါ
LXDE ကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်သည်။ သင်သည်အခြားစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများနှင့်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းမကြုံစဖူးအမြန်နှုန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် eclipse, gimp (သို့) open tabs များပါ ၀ င်သည့်လက်ရှိ browser များကဲ့သို့သောလေးလံသော application များကိုပင်လျှင်မြန်စွာမြန်သည်။
KDE သည်အရာရာတိုင်းတွင်ရှိပြီးအရာအားလုံးကိုရိုးရှင်းစေသော်လည်းသယံဇာတအမြောက်အများသုံးစွဲမှုသည်၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားပြီး၊ တော်လှန်ရေးများဆုံးရှုံးသွားလျှင်၎င်းသည်လည်ပတ်မှုများစွာအတွက်၎င်းကိုလေးလံစေပြီးနှေးစေသည်။ အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်သာရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက် LXDE ကိုအကြံပြုသည်မှာမှန်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဂရပ်ဖစ် interface မပါသောလုပ်ဆောင်မှုများရှိပြီးသင်ကြောက်သော terminal သို့ရောက်ရန်လိုသည်မှာ keyboard shortcuts များဖြစ်သည် (Obkey ရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါင်းစည်းမပေးပါ။
ငါထင်တာကတော့ LXDE အမြန်နှုန်း (Windows XP ထက်အများကြီးပိုမြန်) သည်သူ၌ရှိပြီးဖြစ်သောအားနည်းချက်တစ်ခုနှင့်အားကောင်းသောအချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်အခြားမည်သည့် desktop ထက်မဆိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်သည်။ လာပါ၊ နည်းနည်းလေးအလေ့အကျင့်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပဲလေ။ အခြားသူများအကြားပြတင်းပေါက်ဖွင့်သောအခါနှေးကွေးခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်မရှိခြင်း၊ မဆိုအိုးလုံလောက်🙂
အခြားကွန်ပျူတာများနှင့်ဆင်တူရန် kde ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
Gnome2 သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြိုးစားခဲ့သမျှအကောင်းဆုံး desktop environment တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတော်များများကရိုးရှင်းပြီးကြော့အင်္ဂါရပ်များမက္ကဆီကန်မန်နေဂျာကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောပတ် ၀ န်းကျင်စာရင်းတွင်နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါ ERA လို့ပြောတာပါ။
Gnome3 ထွက်လာတော့ကျွန်တော့်အမြင်ကတုန်လှုပ်သွားတယ်။ နှစ်ဘားနှစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးတက်ကြွသော application များအတွက်တစ်ခုပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုမှတစ်ခုသို့သောအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းရမည်၊ ၎င်းသည်သော့ပေါင်းစပ်မှုကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မင်္ဂလာရှိသော application မ်ားမီနူးကိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကာတွန်းကားတွေရဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Gnome3 ဟာစုစုပေါင်းအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုနဲ့ Unity ကိုကိုက်ညီဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါတောင်မှအဆုံးစွန်သောသူ့ကိုရိုက်တယ်ထင်ပါတယ် ငါမသိဘူး။
ငါ LXDE ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကဆွဲဆောင်ခဲ့တယ် KDE သည်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ စကားမစပ်ငါ့ကိုမ။ အရသာများသည်အရသာများဖြစ်သည်။
Carlos Bolaños ဟုသူကပြောသည်
linux အားလုံးထဲမှာငါ Linuxmint KDE နဲ့ fedora, suse, ubuntu, mandriva cinemon စသည်တို့ကိုသုံးပြီးအရာအားလုံးကိုသုံးပြီး linuxmint 17 နဲ့အတူရိုးရှင်းတဲ့ linuxmintXNUMX နဲ့အတူအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ဖို့ multimedia ပရိုဂရမ်များ၊ အင်တာနက်၊ ရုံးသုံးဂရပ်ဖစ်၊ ဖန်သားပြင်နောက်ခံတို့ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ စသည်တို့
Román Alejandro Lazcano Hdez ။ ဟုသူကပြောသည်
ဖတ်ပြီးတဲ့အခါသင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ငါပြောလိုက်ရင်၊ ၀ င်းဒိုး ၇ နဲ့ ၃၈၀ မဂ္ဂါဝပ်အတွင်းရှိ Athlon IIx7 (2250 bit) ပရိုဆက်ဆာ၊ 64 targz, mother targ asrok n3000-vs68, ddr3-a3 1mb / 2048mhz ၀ င်းဒိုးများနှင့်အတူငါ့ကိုအပ်နှံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ , - စီးပွားရေးပြtheနာများကြောင့်ပင်လယ်ဓားပြဖြစ်ခဲ့သော ubuntu, linuxmint နှင့်ယခုအချိန်တွင် fedora -live, desktop-400-86-64-20 ဖြင့်ကြိုးစားသည့်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသည်။ iso- လည်းငါ့ကိုထိုကဲ့သို့သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အဖြစ်ပြproblemsနာများကိုပေးတော်မူပြီ။ Ubuntu မှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ audio လုပ်လို့မရဘူး၊ Fedora update နှစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအလုပ်မလုပ်သေးဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cursor ကလုံးဝမလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်၊ desktop ပေါ်ကို ၀ င်ပြီးရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ပုံသည်ပုံပျက်။ အံ့အားသင့်စေသည်။ ဒီကနေ့ငါထပ်မံတပ်ဆင်ချင်တယ်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ Ubuntu ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်လည်းတပ်ဆင်ထားတဲ့ disks တွေကိုမဖတ်ရဘူး။ ငါဖတ်လိုက်တဲ့ post ထဲမှာဒီ fedora ဗားရှင်းက Windows 1 လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်၊ အခြားမည်သည့် operating system ကိုမှတပ်ဆင်။ မရနိုင်ပါ။ —————————————————————————————————— ကျွန်ုပ်မည်သည့်အနုပညာ fedora ကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
Román Alejandro Lazcano Hdez အားပြန်ပြောပါ။
ဒီဘလော့ဂ်ကကျနော့်ကို interface တစ်ခုရွေးဖို့အများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ရေးသားသူတိုင်းမှာသူပြောနေတာနဲ့သူမလေးစားသင့်တာတွေကိုလုံလောက်စွာသိတယ်ဆိုတာပြတယ် \_ t
သေချာသည်မှာ XFCE4သည်နေရာတိုင်းတွင်ပျံသန်းနေပြီး၎င်းသည်အသွင်အပြင်၏စွမ်းရည်သည် Gnome နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်အလွန်သာလွန်သည်။ သို့သော် KDE4 သည်အလှအပတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းဟောင်းများတွင်အနည်းငယ်သာကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်စက်များစွာရှိပါက KDE5 သည် (ပထမ ဦး ဆုံးဗားရှင်းများကိုလှည့်နေသည်) စိတ်ကူးယဉ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် KDE2 ram 4Gb ထက်ပိုပါက (5th သို့ရောက်လျှင်) ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်း XFCE သည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပါမောက္ခ Yeow ကိုပြန်ပြောပါ
Demian Kaos ဟုသူကပြောသည်
MATE သည်၎င်းတို့ကို XFCE LXDE မှစတင်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်
Demian Kaos အားစာပြန်ပါ
Alejandro Tor Mar ဟုသူကပြောသည်
ငါ KDE ပန်ကာပေါ့။ ငါ gnome ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်သုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါမကြိုက်ဘူး၊ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်၊ ထူးဆန်းတဲ့စက်ထဲမှာ LXDE ကိုအောင်မြင်စွာ install လုပ်ပြီးပြီ၊ XFCE ကိုစမ်းသပ်ပြီး LXDE ထက်ပိုပြီးကြိုက်တယ် ...
ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်၊ ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက် ဖြစ်၍ စာရင်းကိုင်အစီအစဉ်များအတွက်ရုံးခန်းများတွင် windows များကိုသုံးပြီးအိမ်တွင် Windows နှင့် Linux လက်တော့ပ်၊ တက်ဘလက်နှင့် android ဆဲလ်ဖုန်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည် distros အမြောက်အများကိုသုံးပြီး Debian နှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကြံ့ခိုင်မှု၊ ဖိုင်များနှင့်ဒphilosophနကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ gnome2ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဖိုင်တွေနဲ့အတူအလုပ်အများကြီးလုပ်ကတည်းကငါ nautilus (thunar) ကဲ့သို့သောဖိုင်များ / ဖိုင်တွဲများကိုအတည်ပြုရန်မတောင်းဆိုဘဲဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ Windows Explorer၊ Dolphin နှင့် PCManFM တို့မှာရှိသည်
ငါကဒီအင်္ဂါရပ်အတွက် gnome group ကိုမေးတယ်။ သူတို့ကဒါကဒီဇိုင်းပဲ၊ ဒါကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောတယ်။
gnome ၌ကျွန်ုပ်သည် KDE / LXDE တွင် Dolphin / PCManFM နှင့်အလုပ်မလုပ်သော local network ပေါ်ရှိအခြား PC များမှဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းဖိုင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် local disk သို့ကူးယူရသည်။
သို့သော် knoppix, PCLinuxOS (PCLOS) နှင့် debian live-cd ကဲ့သို့သော distros များတွင်ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ pc တွင်တပ်ဆင်သောအခါ (meta package) အပြည့်နှင့်တတိယ (aptitude or synaptic) တစ်ခုချင်းစီတွင်ပါ မအောင်မြင်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုများ (KIO, SMB စသည်) ကိုပင်တပ်ဆင်ပြီးပြုပြင်ခဲ့သည်။
Dolphin နဲ့ PCManFam ကို gnome မှာသုံးဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ပေါင်းစည်းလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ်။
gnome3 မှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည် interface သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်ရန်အရင်းအမြစ်များအတွက်ဝယ်ယူမှုကိုအားမပေးသော်လည်း၊ အသုံးဝင်သည်၊ ၎င်းသည်ဒေသခံကွန်ယက်တွင်ဖိုင်များဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်အမှိုက်သို့ဖျက်ခြင်း / ပေးပို့သည့်အခါအတည်ပြုရန်မတောင်းဆိုပါ။
အတည်ပြုရန်တောင်းဆိုသော်လည်း KDE တွင်ကွန်ယက်တွင်ဖိုင်များကိုငါမဖွင့်နိုင်ပါက
xFce ဆိုတာရိုးရိုးလေး gnome ပါ၊ ကျွန်တော်အဲဒါကိုအတော်လေးလေ့လာခဲ့ပြီးမကြိုက်ဘူး၊ လိုအပ်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုချန်ထားခဲ့တယ်
ငါ LXDE ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် local network မှာဖိုင်တွေဖွင့်လို့မရဘူး။
ဒေသတွင်းကွန်ယက်ရှိမျှဝေထားသောဖိုလ်ဒါများမှဖိုင်များမှဖွင့်ရန် / အသုံးပြုရန် PCManFM သို့မဟုတ် Dolphin ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
ဖိုင်တွေ (သို့) ဖိုင်တွဲတွေကိုပယ်ဖျက်တဲ့အချိန်မှာ Nautilus ကိုအတည်ပြုဖို့ဘယ်လိုတောင်းဆိုမလဲ။
Antonio Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
kn2ကိုဖြတ်သန်းသွားသော gnome4ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် gnome3option သည်ကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားစေခြင်းမရှိဘဲဆန့်ကျင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို kde မှ5သို့ကူးသွားခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းမိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသော desktop ဖြစ်သည်။ Deepin အတွက်မူ၎င်းသည်အစာကြေ။ မရပါကလှပ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မသိသောအရာနှင့် Lxde နှင့် Xfce နှင့်အလွန်အခြေခံကျပြီးအကြမ်းမဖက်ပုံရသည်။
KDE5သည်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။
Linaro သည် Android 4.0.4 စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၁၀၀% အထိမြှင့်တင်ပေးသည်။
Digia မှ KDE သို့ဖွင့်လှစ်သည့်စာ